Daraasaad: Maxaa Keena Qoyaanka Xubinta Haweenka, Xal Ma Loo Helayaa? - iftineducation.com
Daraasaad: Maxaa Keena Qoyaanka Xubinta Haweenka, Xal Ma Loo Helayaa?
aadan21 / February 14, 2012
Maxaa Keena Qoyaanka Xubinta Haweenka
iftineducation.com – Qoyaanka xubinta taranka ay leedahay ayaa ah mushkilad aad u badan oo haween badan ay ka sheegtaan taasi oo ku beerta wel wel oo ku aadan badnaashaha qoyaankaas , waxaana arintaan ka sheegta 60% haweenka.
Qoyaan dheecaaneedkaas ayaa midab ahaan cad , waa uu jiid-jiidmayaa waxa uuna dhab aana u shabahaa dheecaanka ukunta oo kale.
Inta badan xubinta taranka haweenka waa ay qoyan tahay maadama uu leeyahay maadada loo yaqaan Lactic acid oo ah maado caaneed taasi oo ka soo shubanta halboow layaasha dhiigga taasi oo quudisa darbiga xubinta haweenka.
Sidoo kale qoyaanka xubinta taranka mararka qaar waa uu kordhaa taasina waxa ay ka dhalaneysaa cilado ku yimaada hormone-da waxa ayna tani timaada marka dhiiga laga qubeysto.
Halka cun cunka ama xanuunada xubinta taranka yimaadaan marka ay heerka sokorta iyo carbohydrates-ka ay aad u sara maraan waxa ayna dhacdaa xiliyada uurka .
Sidoo kale haweenka dhiiga uu ku yar yahay xiliga malabyarowga lagu jugeynayo dheecaano badan ayay soo deysaa.
Waxaad ogaataa in dheecaanada xubintu soo deyso in ay yihiin wax dabiici ah maxa yeelay waxa ay si automatically ah u nadiifiyaan unugyada dhintay iyo bacteriyada waxa ayna dheecanada ka yimaadaan qanjirka gudaha minka .
Sidoo kale dheecanaadaan qoyaanka waxaa la arkaa ka dib marka dhiiga laga qubeysto waana adag yihiin waana cad yihiin.
Balse waxaa ogaataa in qoyaanka yimaada marka malabyarowga uu galayo xubinta waa mid fududeyneysa in si sahal ah uu ku galo oo uu ku mirqo si sahal u noqoto ruxitaanka.
Qorshaha ku darso mararka qaar dheecanaadas waa kuwo iska caadi ah maxa yeelay xubinta taranka wax aay leedahay sakxad jilicsan sida indhaha iyo gudaha sanka ee qoyaanka leh balse mararaka qaar waa ku duwan tahay waxii ka dheereaad ah taqtarka haweenka la xariira.
Dheecanaada iska dabiicga ah midib ahaan waa cad yihiin waana jileec , mana laha wax shiir ah sidoo kale ma keento cun cun .
Hadaba maxaa keena dheecanada badan ee xubinta taranka?
Adeegsiga kareemooyinka xubinta taranka loogu tala galay , saabuunada oo xasaasiyad ku reebi kara xubinta haweenka , xerashada dhar hoosaadka cariiriga ah (nikis kugu dhagan) iyo xanuunka sokorowga.
Sidoo kale infekshan ku dhaca dhuunta minka , cudarada taranka ku dhaca iyana waa keenaan.
Hadaba waxii intaas ka badan taqtar la xariir hadii heerkaas gaarinna waxaad sameysaa darbiga xubinta taranka waxad ku karemeysa burcadka caanaha , marka xaajada soo gudato(Suuliga) si wacan u nadiifi
Ragga Awooda Galmada Ku Yar Tahay Ee Xulbada Iyo Maraqa Qubada Nafta Isaga Qaaday Oo Talo Loo Hayo.
Wuu I Qiyaanay Waliba i Dhaawacay Hadana Waxa Uu Iga Codsanayaa In Aan Saaxibo Guud Noqono , Ha Iga Xasdina Taladiina